London (CNN Business) Nlaghachi ogologo oge bụ nnukwu nsogbu maka ndị isi ụlọ ọrụ ka ha na-atụgharị uche na mkpochapụ ahụ site na oria ojoo a na-efe efe. Ma enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-eme ka ha mụrụ anya n’abalị. Ndị na-eme ihe bụ ndị ọrụ ya ịchọpụta ihe ọghọm na-echekwa… GỤKWUO »
Iko na iko na-ebupụ nke mba ahụ ruru ijeri US $ 76.5 na 2019. Ọnụ ego dollar ahụ na-egosi uru 12.2% maka ndị na-ebubata ngwaahịa na afọ ise malite na 2015 mgbe mbupu ngwa ahịa ndị a ruru $ 68.3 ijeri. ... GỤKWUO »
Industrylọ ọrụ iko kọfị China na-akọ na uto kwụsiri ike na 2019
Oge nzipu ozi: Mee-11-2020
Industrylọ ọrụ nke iko China ji akara aka kwụsie ike n'afọ gara aga na mbọ nke imeziwanye akụkụ nhazi a, dịka Ministri nke Industrylọ Ọrụ na Nkà na ụzụ Ozi (MIIT) si kwuo. N'afọ 2019, mbupute nke iko efere dị nde 930 nde ikpe, ihe ruru 6.6 pasent afọ… GỤKWUO »
N’abali asaa, Mee 7 (Xinhua) - Mbubata ngwa ahịa ndị China na-atụgharịghachi n’ọnwa Eprel, na-agbakwunye na akara na azụmaahịa mba ofesi na-ejigide ya ebe ọzọ na-atụzi COVID-19. Mbubata mbuba nke mba ahu ritere elu 8.2 n'ime afọ rue 1.41 trillion… GỤKWUO »
Dabere na nzukọ ndị isi ala na China State Council na Eprel, 7th, 2020, megide ọnọdụ ọrịa zuru ụwa ọnụ, nzukọ ahụ kpebiri, 127th Canton Fair nke e mere na ntanetị ruo etiti mbubreyo nke June kpọọ ngosipụta ntanetị ... GỤKWUO »
Banyere Borosilicate Glass
G ISN IS BARA GLASS? Borosilicate iko bụ ụdị iko nke nwere boron trioxide nke na-enye ohere maka ọnụọgụ nke okpomoku dị ala. Nke a pụtara na ọ gaghị agbawa n’okpuru mgbanwe mgbanwe ihu igwe dịka iko oge niile. Ogologo ya emeela ya ka… GỤKWUO »
China egbughị oge n'ịtọpu ihe
Oge nzipu ozi: Apr-20-2020
N'inwe ọtụtụ akụkọ wee were intanet na intaneti jiri nnukwu ncheta na nghọta dị nkọ, "ihe mkpofu," okwu yiri ka ọ dị n'egbugbere ọnụ onye ọ bụla na China, bụ otu n'ime ihe 10 na-eme kwa afọ nke usoro mgbasa ozi a na-ejikarị eme ihe site na mgbasa ozi. n’afọ 2019, dịka… GỤKWUO »
China kwere nkwa ịkwado ụlọ ọrụ azụmaahịa ala ọzọ dịka nje virus metụtara akụ na ụba ụwa
N'abali asaa, Eprel 9 (Xinhua) - China kwere nkwa na m ga-aga n'ihu na-enyere ndị ahịa ya aka site na mba ofesi ma belata nsogbu COVID-19 na mpaghara ahụ ka nje virus ahụ metụtara akụ na ụba ụwa na azụmaahịa mba ụwa, MOC kwuru. Mbubata na mbubata obodo a na-en ... GỤKWUO »
Nchịkọta dị mkpirikpi nke ọnọdụ dị ugbu a na atụmanya nke ụlọ ọrụ mkpogharị ahịhịa mkpofu na China
Ọ bụrụ n’obodo anyị nwere “nke m” nke rewigharị, iko ahihia bụ mmanụ a na-achọ ngwa ngwa n’ebe a na-egwupụta akụ. Iko ahihia bu otu n’ime ihe ndi siri ezigbo ike obibi na mkpofu ahihia. Ha dịkwa oke ọnụ ma ọ bụrụ na ha na-ebuga ma na-agba ọkụ, na enweghị ike b ... GỤKWUO »
Ndụmọdụ Nje Virus COVID19 nke oma nke China
Oge nzipu ozi: Apr-01-2020
N’ime ọnwa abụọ gara aga na China, anyị na-agbaso ndụmọdụ ndị a iji wee banye. Ugbu a, anyị nwere olile anya na ndụmọdụ ndị a nwere ike inyere onye ọ bụla chọrọ. 1.Onye eleda anya na nje. 2.Mgbe niile na-eyi ihu ihu. 3.N’oburu mgbaàmà ọ bụla, gaa na nke dọkịta tupu mgbe ahụ. 4.Ọ bụghị nzukọ, nọrọ n'ụlọ. 5.Ọ bụrụ izere, kpuchie ọnụ gị… GỤKWUO »
Oge nzipu ozi: Dec-23-2019
Ọ bụ 2002. Anyị na-achọ ezigbo iko iko ọkwa ọkwa na mkpuchi nke ọnụahịa dị mma, mana ọ dị mwute na anyị achọtaghị otu. Anyị chọpụtakwara na ọtụtụ ụlọ ọrụ dịka anyị n'oge ahụ nọ n'ụdị nsogbu a. N'ihi ya, anyị kpebiri inyere ndị ụlọ ọrụ dị otú ahụ aka idozi nsogbu a na kpakpando ... GỤKWUO »